Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahin Ku Saabsan Weerarkii Ka Dhacay Masjid Ku Yaala Dalka Masar.
Faah Faahin Ku Saabsan Weerarkii Ka Dhacay Masjid Ku Yaala Dalka Masar.
Masuuliyiinta Masaarida ee baadhaya xasuuqa dadkii lagu laayay masjid ku yaalla Siinaay ayaa sheegay in kooxdii weerarka qaaday ay siteen calanka kooxda dawladda islaamiga ee Daacish.
Ilaa 305 qof ayaa weerarka ku dhintay, kaasoo la qaaday intii lagu jiray salaaddii Jimcaha, walina ma jirto cid sheegatay.
Dacwad oogaha dalka Masar ayaa sheegay in ilaa 30 qof ay weerarka qaadeen. Madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi ayaa wacad ku maray in uu ku jawaabi doono “awoodda ugu sarraysa”.
Militariga Masar ayaa sheegay in ay weerarro xagga cirka ah ku qaadayaan bartilmaameedyada “argagixiso”. ciidanka amniga ee Masar ayaa muddo sanooyin ah dagaal kula jiray kacdoon islaamiyiin oo ka jiray gacan biyoodka Siinaay, mintidiin gacan saar la leh kooxda dawladda islaamiga (ISIS) ayaa waxay ka dambeeyeen tiro weerarro lagu dhintay ah oo ka dhacay Gobolkaas iyo degaanka ku yaalla.
Masjidka Al-Rowda ayaa qaraxyo lagu weeraray, ka dibna tiro dabley ah oo banaanka joogay ayaa rasaas oodda uga qaaday dadkii badbaaday ee cararayay qaarkood ragga weerarka qaaday wajiga ayaa u daboolnaa, waxayna xidhnaayeen dharka milateriga u eg. Daaqadaha iyo albaabada ayaa la sheegay in ay dadka ka tooganayeen.
Raggaas waxay sida muuqata dab qabadsiiyeen gawaadhi halkaa taallay, si ay u xannibaan in dhismaha la galo, waxayna rasaas ku rideen gawaadhida gargaarka deg degga ah. 30 carruur ah ayaa ku jiray dadka dhintay, tiro 100 ka bandanna way ku dhaawacmeen.